Trump ၏တရား ၀ င်အိပ်မက်ဆိုးသည်ဆက်ရှိနေသည်။ CFO စွဲချက်တင်ခံရပြီးနောက်အမှုဖွင့်ခံရသောအကြီးအကဲအားတရားစွဲဆိုခြင်း MSNBC ၏ဥပဒေရေးရာသတင်းထောက် Ari Melber သည် Mother Jones ၏ David Corn၊ The New York Times ၏ဆောင်းပါးရှင် Michelle Goldberg နှင့်နိုင်ငံရေးဗျူဟာမှူး Chai Komanduri တို့နှင့်အမှုကိုဆွေးနွေးသည်။ » MSNBC ကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ - http://on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc “ The Beat with Ari Melber” သည်နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုညနေ ၆ နာရီ ET တွင် Emmy အနိုင်ရသတင်းစာဆရာနှင့်ရှေ့နေ Ari Melber (@arimelber) တို့ကကျောက်ချခဲ့သည်။ The Beat သည်ဧည့်သည်များစွာနှင့်မူရင်းတင်ပြမှုနှင့်အသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများကိုအဓိကထား။ ထူးချွန်သောအင်တာဗျူးအမျိုးအစား၌ ၂၀၂၀ Emmy အတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ MSNBC သည်ကြေကွဲဖွယ်သတင်း၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းစီးများကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဝေဖန်ချက်နှင့်အသိအမြင်များကိုပေးသည်။ The Rachel Maddow Show, Morning Joe မှသတင်းစာကလစ်များနှင့်အပိုင်းများကိုရှာပါ၊ နေ့စဉ်သတင်းစာနှင့်တွေ့ဆုံပါ၊ Ari Melber နှင့်အတူရိုက်နှက်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးရက်: Nicolle Wallace နှင့်အိမ်ဖြူတော်၊ အားလုံး၊ နောက်ဆုံးစကား၊ ၁၁ နာရီနှင့်အခြားအရာများ MSNBC အွန်လိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ msnbc.com သို့သွားပါ။ http://on.msnbc.com/Readmsnbc MSNBC သတင်းလွှာကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ။ http://MSNBC.com/NewslettersYouTube Facebook ပေါ်တွင် MSNBC ကိုရှာပါ၊ http://on.msnbc.com/Likemsnbc Twitter ပေါ်တွင် MSNBC ကိုလိုက်နာပါ။ http://on.msnbc.com/Followmsnbc Instagram ပေါ်တွင် MSNBC ကိုလိုက်နာပါ။ http://on.msnbc.com/Instamsnbc #MSNBC #Trump #TrumpInvestigation
The billionaire fundraiser Donald Trump tapped to run his inauguration has been indicted on lobbying and obstruction charges. MSNBC’s Chief Legal Correspondent Ari Melber is joined by Mother Jones’ David Corn, The New York Times’ columnist Michelle Goldberg, and political strategist Chai Komanduri to discuss the case.
Watch The Beat With Ari Melber Highlights: July 20th | MSNBC
Men's 100m Semi-Finals | World Athletics Championships Doha 2019
Trump CFO Waives Right To Remain Silent During Arrest
Former AG Rosen Avoided Questions In Select Committee To Protect Trump